TTSweet: အန်တီဆွိရဲ့ ကြုံရ ...ဆုံရ ...ဘုံဘ၀ မှာဖြင့် - အပိုင်း (၂)
အန်တီဆွိရဲ့ ကြုံရ ...ဆုံရ ...ဘုံဘ၀ မှာဖြင့် - အပိုင်း (၂)
အန်တီဆွိရဲ့ ကြုံရ ...ဆုံရ ...ဘုံဘ၀ မှာဖြင့် - အပိုင်း (၁) .... မှ အဆက်
အန်တီဆွိတို့သည် ညဆို ကော်ဖီဆိုင်လိုက်ရှာ၊ မနက်ဆို အေးဂျင့်အား ဖုံးဆက်၊ လိပ်စာမေးကာ ကားတစ်စီးဖြင့် ကော်ဖီဆိုင် အခြေအနေကို ထောက်လှမ်းစုံစမ်းကြတော့သည်။ လူလာမလာ၊ နေရာကောင်းမကောင်း၊ ပြိုင်ဖက်ရှိမရှိ၊ အလားအလာရှိမရှိ၊ အလုပ်သမား ဘယ်နှစ်ယောက်၊ သူတို့ပြောသည့် စာရင်းဇယားတွေအတိုင်း အမြတ်ကျန်သည်မှာ မှန်သလား၊ အကြမ်းဖျင်း တွက်ချက်ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၃၀-၄၀ ခန့် ကြည့်ရှူ စုံစမ်း အပြီးတွင် စိတ်ကြိုက်ဆိုင်လေးတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားသည်။ ဆိုင်ကလေးသည် သေးပေမဲ့ သပ်ရပ်သည်။ မြို့ငယ်လေး၏ဈေးအနီး လူနေရပ်ကွက်ထိပ်ကလေးတွင်ရှိရာ မြို့ငယ်လေးမှ လူထုသည် ထိုဆိုင်လေးကို တော်တော်အားပေးကြသည်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ကိုယ်တိုင် ကော်ဖီဖျော်ကာ အလွန်ဖော်ရွေ ဆက်ဆံရေးကောင်းသောသူအဖြစ် မြို့ကလေးတွင် လူသိများသူဖြစ်သည်။ ကြည့်သမျှဆိုင်များထဲတွင် လူအလာဆုံး၊ လူအကျဆုံး၊ ဆိုင်ခန်းငှါးခ အနည်းဆုံး ဆိုင်လေးဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်မှ ငွေချေးစရာမလိုပဲ ကိုယ်ဝယ်နိူင်သော ဘက်ဂျက် ထဲမှာရှိပါသည်။ တစ်လ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅ထောင် -၆ ထောင် ခန့် အမြတ် ကျန်နိူင်သော ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။
တွက်ရေးက စက်သုဋ္ဌေး ...
ဆိုင်လေးသဘောကျနေ၍ နောက်တဆင့်တက် ဆိုင်ရှင်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို မှန်မမှန်စစ်ဆေးရန် အေးဂျင့်ကို ခွင့်တောင်းကာ ဆိုင်ရှင်နှင့် သွားတွေ့ကြပါသည်။ ဆိုင်ရှင်သည် အီတာလျှံလို ရုပ်မျိုး ကော့ကေးရှန်းဖြစ်သည်။ စကားပြောအလွန်ကောင်းသည်။ ဆိုင်ရှင်မှပြောပြသည့် အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများမှာ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ထင်ထားသည်ထက်ပင် အားရကျေနပ်စရာကောင်းပါသည်။ အတိုချုပ်ဆိုသော် ဆိုင်ကလေးသည် အမှန်ပင် ၀ယ်ချင့်စဖွယ်ဖြစ်နေပါသည်။ ဆိုင်ကိုသွားသည့်နေ့က ဆိုင်မှာ လူကျနေရာ ထိုင်စရာပင်မရှိ တန်းစီနေသည့် လူအုပ်ကိုကြည့်ကာ ဆိုင်ဝယ်မည့် လင်မယားမှာ ၀မ်းသာနေပါသည်။ ဆိုင်ဝယ်ဖြစ်ပါက စီစဉ်ထားသည်မှာ ကိုကိုခြိ်မ့်က ဆိုင်ရှင်နေရာ ၀င်ယူကာ ကော်ဖီဖျော် (Barista) လုပ်ရင်း cashier လုပ်မည်။ ဆိုင်က နဂိုရ်ရှိပြီးသား chef ကောင်လေးကို ဆက်ခန့်ထားမည်။ ဂျူဂျူလေး ကျောင်းပို့အပြန် အန်တီဆွိက ကော်ဖီဆိုင်ဝင်ကာ လက်တိုလက်တောင်း လိုတာ ၀င်ကူလုပ်မည် ဟူ၏။
တွက်ရေးကတော့ စက်သူဋ္ဌေးဖြစ်နေပါပြီကော။ အရာရာ ချောမွေ့ အဆင်ပြေနေသည်။
သတင်းကောင်းလေး တစ်ခု ...
ကော်ဖီဆိုင်လေး တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် ၀ယ်ခါနီး ကိုကိုခြိမ့်သည် အလုပ်ဟောင်းမှ အရာရှိနှင့် အဆက်အသွယ်မပျက်ရှိရာ သူတို့ force to leave ယူပြီး ရုံးပြန်တက်ရမည်ဟုပြောသောရက် ၂ရက်အလိုတွင် သတင်းကောင်းတစ်ခုပို့လာသည်။ သူတို့လို termination letter ရထားသူများလဲ ရုံးကိုလာကြပါ။ ကုမဏီ အသစ်မှ HR ဒါရိုက်တာလာကာ စကားပြောမည်။ အလုပ်သမားများ၏ ပြသနာများကို ၀ိုင်းဝန်းအဖြေရှာ ဆွေးနွေးကာ warming up section ခေါ်မည် ဆိုသည်။ ကိုကိုခြိ်မ့်ကဲ့သို့ သူတို့သဘောကျသူ၊ key performer တွေကို ပြန်ခေါ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေရှိနိူင်သည်၊ သေတော့ မသေချာဟုပြောလာသည်။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ ကိုကိုခြိ်မ့် အလုပ်ပြန်ရစေရေးအတွက် ဟိုဖက်က မန်နေဂျာကို တိုက်တွန်း စကားပြောပြီး ဖြစ်သည် ဆိုပါသည်။
အန်တီဆွိမှာ ထိုကိစ္စကို ယုံကို မယုံနိူင်ပါ။ termination letter ရပြီးသားလူကို အလုပ်ပြန်ခန့်မည်တဲ့၊ ဖြစ်နိူင်ပါမည်လော။ ယုံတမ်းစကားသာဖြစ်မည်။ လောကတွင် မကောင်းသတင်း၊ အဖြစ်အပျက်များသာ ဖြစ်ပျက်နေရာ ထိုကိစ္စကို တကယ်ဖြစ်လာမည်ဟု လုံးဝ မယုံကြည်ခဲ့ပါပေ။
ရင် တထိတ်ထိတ် ...
ထိုနေ့က ကိုကိုခြိမ့် ဘုရားစင်ရှေ့မှာ အကြာကြီး ဘုရားရှိခိုးပြီးမှ အလုပ်သွားသည်။ အန်တီဆွိလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် ကိုကိုခြိမ့်ထံမှ ဖုန်းအလာကို စောင့်နေသည်။ နေ့လည် ၁၁နာရီအထိ ဘာသတင်းမှမကြားရ။ နေ့လည်စာစားချိန် နီးတော့ ဖုန်းဝင်လာသည်။ အရင်ကုမဏီက အရင် အလုပ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ စီစဉ်ထားခဲ့သည်ကို ယခုလက်ရှိကုမဏီက လက်မခံပါတဲ့။ ခုသူတို့ စိတ်ကြိုက်လူတွေကို ပြန်ခေါ်ပြီး စာအိပ်တွေ (offer letter) ပေးပြန်ပါသည်တဲ့။ အော်သူတို့တွေ အဖြစ်မှာ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ဖြစ်နေပါပြီကော။ စာအိပ်တွေ ရလိုက်၊ မဟုတ်ဘူးဆိုက ပြန်ဖျက်လိုက်၊ ပြန်ရလိုက်နှင့် လူတွေ ဘ၀တွေလဲ ဇကောထဲထည့်ကာလှဲ့သည့် ဇီးဖြူသီးတွေလို ပရမ်းပတာရှိလှသည်။ တော်တော်ခံစားကြရမည်။
ကိုကိုခြိမ့် စာအိပ်ရလားဆိုတော့ ရဖို့ chance တော့ရှိတယ် ထင်တာပဲတဲ့။ ခုချိန်ထိတော့ မရသေးဘူး တဲ့။ အလုပ်သမား ၄၀၀လောက်ရှိရာ စာအိပ်တွေကို တန်းစီပြီး ယူနေရပါသည်တဲ့ ။ သူ့အလှည့်ရောက်ခါနီးပြီမှို့ ဆုတောင်းပေးပါ ဆိုလာသည်။ အန်တီဆွိ်လည်း ဟင်းချက်နေရာကနေ ဘုရားစင်ရှေ့ပြေး သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်တွေ၊ ဘာတွေပြုကာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ ၅မိနစ်နေတော့ ဖုန်းထပ်ခေါ်ပြီင်္း သူ offer letter ပြန်ရပြီ ဆိုသည့်အကြောင်း ၀မ်းသာအားရ လေသံနှင့်ပြောပါသည်။ အန်တီဆွိကား အိပ်မက်တစ်ခု ထပ်မက်နေသည်လား၊ အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုမှ နိူးထခဲ့ပြီလား မသေချာ၊ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည်လား ဆန်းစစ်ကြည့်နေရသည့် အခြေအနေ ရောက်နေသည်။ ညနေ ကိုကိုခြိမ့်ပြန်ရောက်တော့ ယခင် မြင်တွေ့နေကျ ကိုကိုခြိမ့်၊ တက်ကျွလန်းဆမ်းနေသော ကိုကိုခြိမ့်ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိရပါသည်။
တစ်ချို့လဲ ဒီတစ်ခေါက်မရ ...
ယခုတစ်ခေါက်လည်း offer မရသူ ၁၀၀ခန့်ရှိရာ အန်တီဆွိတို့မှာ ကိုယ့်အတွက် ၀မ်းသာရသော်လည်း ထို အဖြစ်အပျက်မျိူးခံစားဖူး၍ offer မရသူများအတွက် ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်မကောင်းအမှန်ပင် ဖြစ်မိပါသည်။ ကိုကိုခြိ်မ့် ပထမတစ်ခေါက် terminate လုပ်ခံရစဉ်က အမြဲဖုန်းဆက် အားပေးသောသူသည် ယခုတစ်ခေါက်တွင် အော်ဖာလက်တာမရခဲ့ပါ။ သူကကံကောင်းသည်မှာ သူ့ အမျိုးသမီးက အလုပ်လုပ်၍ ကိုယ်တွေလောက်မဆိုး၊ နေသာထိုင်သာ အနည်းငယ်ရှိသည် ဆိုရမည်။
ကော်ဖီဆိုင် ဘာဆက်လုပ်မည်လဲ ....
ကိုကိုခြိမ့် အလုပ်သွားနေရင်းဖြင့်ပင် စုံစမ်းလက်စ ကော်ဖီဆိုင်ကလေးကိုလဲ ဆက်လက် စုံစမ်း လေ့လာနေကြဆဲဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကိုကိုခြိမ့်သည် ယခုအလုပ်ကလဲ ဘယ်လောက် မြဲမှာလဲ၊ သေချာရေရာ ဘာမှ မပြောနိ်ူင်သည့် အခြေအနေဖြစ်ရာ ကော်ဖီဆိုင်လေးကို ဆက်ဖွင့်ကြမည်။ အန်တီဆွိမှ ဦးဆောင်ကာ ကော်ဖီဖျော်သူ (barista) တစ်ယောက်၊ ချက်ပြုတ်သူ (chef) တစ်ယောက်ငှါးကာ ကိုယ်က ဆိုင်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်၊ ကျရာ ကူညီလုပ်ရင်းဖြင့် ၀င်ငွေမရလဲ ကိစ္စမရှိ အတွေ့အကြုံရအောင်ယူမည်ဆိုကာ ဆက်ဖွင့်မည် စိတ်ကူးသည်။
chef က အလုပ်ထွက်ပြီ ...
နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ဆိုင်သွားကြည့်ကြသည့်နေ့ကတော့ ဆိုင်ပိတ်ချိန်မှို့ အေးအေးဆေးဆေးရှိလှသည်။ ကိုယ်မေးလိုသော မေးခွန်းများကို အပြန်အလှန်မေးကာ ဆိုင်ရှင်နှင့် စကားစမြည်ပြောကြသည်။ ဤတွင် ဆိုင်ရှင်ထံမှ ယခုလုပ်နေသော chef ကောင်လေးသည် ဆိုင်ရောင်းမည်ဆိုသည်နှင့် အလုပ်မှ ထွက်သွားပြီဆိုသည်။ သူသည် အလွန်ရှက်တတ်ရာ (very shy guy ဟုဆိုသည်) အလုပ်ရှင် အသစ်နှင့် မနေလိုဟု အကြောင်းပြချက်ပေးသည်တဲ့။ အန်တီဆွိတို့လည်း အတော်အားလျော့သွားသည်။ ကိုယ်ဖွင့်မည့်ဆိုင်သည် သူတို့ အော်ဇီ အဖြူတွေဖက်ကကြည့်လျှင် ဆိုင်ပိုင်ရှင် အသစ်က အေရှန်းတွေ ၊ပြီးတော့ ... ရင်းနှီးပြီးသား အရင်လက်ဟောင်းလူ တစ်ယောက်မှမကျန်တော့၊ ဘယ်ရီစ်တာအသစ်၊ ချက်ဖ် အသစ်နှင့် အားလုံးအသစ်တွေ၊ ယခင်လက်ရာ မှီပါ့မလား။ အေရှန်တွေက ယခင်လို ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေပါ့မလား ... စဉ်းစားမည်။ အဆုံးစွန် အေရှန်ဆိုင် အားမပေးဆိုကာ နောက်ဆိုင် ပြောင်းသောက်တာမျိူးလဲ ဖြစ်နိူင်ပါသည်။
ကော်ဖီဆိုင် အနာဂတ် ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ ...
နောက်ပြီး ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်သူကလဲ တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံရှိသူမဟုတ်၊ ကော်ဖီမှာလို့မှ အော်ဇီဘာသာစကားကိုပင် ကောင်းကောင်းနားမလည်သော
အေးရှန်းပိုင်ရှင်။ အစရှိသည်တို့ကိုတွေးကာ အန်တီဆွိမှာ ကြောက်လာပါသည်။ သတ္တိမရှိပါ။ မစွန့်စားရဲပါ။ ထို့အပြင် ကော်ဖီဆိုင်သည် မနက်၆နာရီဆိုင်ဖွင့်ဖို့ အရေး မနက်၅နာရီ အိပ်ရာက ထလာရမည်။ ဂျူဂျူလေးကို ကျောင်းကြိုကျောင်းပို့ child care ထားရမည့်တာဝန်၊ ဆိုင်မှာလည်း သန့်ရှင်းရေးကအစ အောက်ခြေသိမ်းလုပ်မှ ၀င်ငွေမရ၊ အတွေ့အကြုံသာ ရနိူင်သောအခြေအနေ ( ကော်ဖီဖျော် ၁၊ chef ၁ယောက် ငှါးပါက အလုပ်သမား စရိတ်ထောင်းကာ အမြတ်ကျန်ဖို့ မလွယ်ပါ)၊ ဆိုင်၏ တိုးတက်နိူင်မှုကို သံတယရှိလာသည့် အခြေအနေ၊ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ ဆိုင်က ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်မည်လဲ ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိူုင်သည့် အချက်၊ ငွေတွေအရင်းအနှီးကြီးကြီးရင်းပြီးမှ ဆိုင် မအောင်မြင်၍ မဖွင့်လိုက ပြန်ရောင်းထွက်ဖို့ရာ ခက်သည့် အခြေအနေ`၊ နောက်ဆုံးရသည့်ဈေးနှင့် ရောင်းလိုက်ရမည့် အခြေအနေထိဖြစ်နိူင်ရာ အားလုံးကို တွက်ချက်၊ ဆန်းစစ်ပြီး အန်တီဆွိမှာ ကိုကိုခြိ်မ့်ကို ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ကိစ္စကို ပြန်စဉ်းစားကြရန် တိုင်ပင်ကြသည်။ ရင်းထားသည့် ငွေကြေးအတွက် အလွန် risk များလွန်းသည်ဟု တွက်မိကြသည်။
Risk မယူရဲတော့ ...
နောက်ဆုံးတော risk မယူရဲသည့် အန်တီဆွိလည်း သူငှေးဖြစ်မည့် ကံမပါလာတော့ ကော်ဖီဆိုင် ပိုင်ရှင်-အကူဘ၀မှ စိတ်ဒုံးဒုံးချကာ ကော်ဖီဆိုင်က ရသလောက် ငါအပြင်မှာရှာလည်း ရတာပဲ။. ငွေ တစ်သိန်းရင်းပြီးတော့ဖြင့် ဒီလောက်ငွေ ရှာဖို့မလိုဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကာ ကော်ဖီဆိုင်အလုပ် ဤတွင် ဓိဋ္ဌိတံလေသည်။ အပြင်တွင် ဘာအလုပ်လေးများ ရနိူင် လုပ်နိူင်မည်လဲ စုံစမ်းသည်။ ဒီကြားထဲ အလုပ်လျှောက်သည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ကလေးတွေ ၀င်ကြည့်ရင်း ကိုယ့်အလုပ်နှင့် တိုက်ရိုက်နီးပါးတူနေသည့် အလုပ်ကလေးများလည်း ကြုံသလို လှမ်းလျှောက်လိုက်သေးသည်။
Interview again ...
အလုပ်ကလည်း လျှောက်သည်နှင့် အင်တာဗျူးခေါ်သည်ချည်းသာဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ကလျှောက်သောအလုပ်သည် အေးဂျင့်နေရာမှာ အင်တာဗျူးသွားရမည်။ ကီလို ၃၀လောက်ဝေးသော မြို့လည်ခေါင်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာဗျူးအတွက် စာတွေပြန်ဖတ်၊ ဘာသာစကားပြောအတွက် အနည်းငယ်ပြင်ဆင်၊ အ၀တ်အစားပြင်ဆင်နှင့် အလုပ်အတော်ရှုပ်သွားသည်။ အင်တာဗျူးမှာတော့ တော်တော်အားရပါသည်။ အင်တာဗျူးသည့်အေးဂျင့်ကလည်း သဘောကျပုံရသည်။ သူ့ကပ်စတန်မာဆီ CV က်ို ပို့ပေးကာ နောက်ထပ် အင်တာဗျူး အတွက် စီစဉ်ပေးမည်ဆိုသည်။ ကိုကိုခြိမ့်တော့ အော်ဇီလိုနေရာမျိုးမှာ အလုပ်တစ်ခါလျှောက်တိုင်း အင်တာဗျူးရနေသော သူ့အမျိုးသမီးကို အံ့သြ၍သာနေပါသည်။
နိမ့်ကျသည့် ဘ၀ ...
အတိုခြုံးပြောရလျှင် အထက်ပါအေးဂျင့်ထံ စာရေးအကျိုးအကြောင်းမေးသော်လည်း CV ကို ပို့ထားသည်။ customer မှ အကြောင်းမပြန်သေးဆိုကာ ယနေ့အချိန်ထိ မည်သည့် ဆက်သွယ်မှုမှ ထပ်မရခဲ့ပါပေ။ အန်တီဆွိမှာကား စိတ်ဓာတ်က ပိုကျလာသည်။ ထစ်ကနဲရှိ ငါစကားပြောတာ အဆင်မပြေလို့လားဆိုကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်သေးကာ ဒီတစ်သက် ဒီအေးဂျင့်တွေနဲ့ ငါနဲ့တော့ ဒီအတိုင်းပြီးတော့မယ်နဲ့တူတယ်၊ အလုပ်ရဖို့တော့ လမ်းမမြင်ဘူး ... ဆိုကာ စိတ်ဓာတ်ကျကာ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်သာမက တခြားဖြစ်နိူင်ချေ ဘာအလုပ်လေးများရနိူင်သေးလဲ ၀ပ်ဘ်ဆိုက်တွေထဲ ၀င်ကြည့်၊ သင့်တော်တာလေးတွေ့ ဖုန်းဆက်မေး။ ဟမ်မလေး အင်မတန် အောက်တန်း နောက်တန်းကျလှချေတကား။ စလုံးမှာနေစဉ်က ကိုယ်ကားကိုယ်မောင်းကာ ရာထူးမြင့်မြင့်၊ လစာမြင့်မြင့်ဖြင့် ကိုယ့်ဘော့စ်ကိုတောင် မကျေနပ်လျှင် ပြန်ဟောက်နိူင်သည့် အခြေအနေ၊ အိမ်မှာလဲ အကူနှင့်ကျော့နေအောင် နေရသောဘ၀မှ ဘာမဟုတ်သည့် အလုပ်ကလေး ရပါမည့်အကြောင်း ဖုန်းဆက်ခါ အောက်တန်းကျကျမေးနေရသည့် ဘ၀ရောက်နေပြီတကား။ အတော်လေး သံဝေဂ ရမိပါသည်။
အန်တီဆွိ အလုပ်မျိုးသည် စင်္ကာပူမှာ အလွန်ပေါသည်။ အန်တီဆွိမှာ စင်္ကာပူ သံယျောဇဉ် မကုန်ရကား စင်္ကာပူမှ Jobsdb နှင့် Jobstreet တွေမှ job alert တွေ အပတ်စဉ်ဖတ်ကြည့်နေရာ တစ်ခါတရံ စင်္ကာပူ ပြန်ပြေး အလုပ်ရှာချင်စိတ်ပင် ပေါက်ပါသည်။ အနှီ ၁၀နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံနှင့် တော်ရုံလစာဖြင့်ရှာပါက အနည်းဆုံး တစ်လ-၂လအတွင်း အလုပ်သေချာပေါက် ရနိူင်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ ဂျူဂျူလေးပညာရေးက ဒီဖက်မှာ အတော်ကို အဆင်ပြေရာ သမီးငဲ့လို့ ဟိုဖက်ပြန်ပြောင်းဖို့ရာတော့ မဖြစ်နိူင်။ ဒီဖက်မှာပဲ ကြိုးစားအလုပ်ရှာရန်သာ အဖြေထွက်ပါသည်။
လာပြန်ပြီ အင်တာဗျူး ...
အန်တီဆွိသည် စိတ်ကလဲ အလွန်မြန်သည်။ စိတ်ကလဲကြီးသည်။ လိုချင်တာကို ခုချက်ချင်းလိုချင်သည်၊ ရချင်သည်။ အော်ဇီသည် စောနက ပြောသလို အလုပ်တစ်ခုရဖို့ ပုံမှန် ၆လ-၁နှစ်ကြာရာ ယခု ၂လလောက်လေးမှာ အလုပ်မရသည်ကို စိတ်ဓာတ်က ကျချင်သည်။ အလုပ်တွေကတော့ လျှောက်မြဲ။ ထိုနေ့က အေးဂျင့်တစ်ယောက်မှ ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ စစချင်း စကားပြောကြပြီး အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အသံကိုကြားပြီးကထဲက မနှစ်မြိုမှန်း သိသာနေသည်။ ပြောနေရင်းဖြင့် medical product အတွေ့အကြုံရှိလားမေးရာ ကိုယ်က အမှန်အတိုင်း လုပ်သက် ၁၁နှစ်မှာ နောက်ဆုံး ၂နှစ်လောက်ပဲ လုပ်ခဲ့သည်ပြောမိရာ သူတို့က medical product ကို ၈နှစ် နှင့်အထက် အတွေ့အကြုံရှိသူသာ လိုချင်ကြောင်းပြောကာ ဂွက်ကနဲဖုံးချသွားလေသတည်း။ အန်တီဆွိမှာတော့ ဒီအေးဂျင့်တွေနဲ့ အင်တာဗျုးနေသရွေ့ ငါတော့ ဒီတစ်သက် အလုပ်မှ ရပါတော့မလား။ ငါ့ ရဲ့ career ကို ဒီ language barrier ပြသနာလေးနဲ့ တစ်သက်လုံး စွန့်လွှတ်လိုက်ရတော့မှာလား၊ စိတ်ဓာတ်က ပိုကျလာသည်။
အရင်က အိမ်ရှင်မ ဘ၀ဖြင့် စိတ်အေးလက်အေးနေရာကနေ ခုတော့ အလုပ်လုပ်ရမည် ဆိုကတည်းက ဘာအလုပ်လေးပဲရရ လုပ်ချင်လာသည်။ ခုချိန်မှာ မလုပ်လဲ နေဖြစ်ပေမဲ့ အလုပ်က ရှာလက်စဆိုတော့ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် စိတ်မှာ တားမရတော့ပါ။ cashier ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ waiter ပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာအတွေ့အကြုံပဲရရ အလုပ်သာ လုပ်ချင်နေတော့သည်။ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ကိုတော့ အတော် စိတ်ကုန်နေပါပြီ။
Casual အလုပ်ဆိုပြန်တော့လဲ ...
ကဲ ...အင်ဂျင်နီယာအလုပ်လို ဦးနှောက်ခြောက်စရာမလို၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး casual ၊ part time ရရာ အလုပ်လုပ်မယ် ဆိုပြန်တော့လဲ အလုပ်တွေ အတော်များများဟာ သက်ဆိုင်ရာ certificate တွေ၊ ဒီပလိုမာ လက်မှတ်တွေ အပြင် အတွေ့အကြုံတဲ့ ခင်ဗျ။ အလုပ်တွေက ပေါပါရဲ့၊ လိုက်ကြည့်တော့ ဘာတစ်ခုမှ ကိုယ်နဲ့ အကြုံးမ၀င်သည့် အလုပ်များသာဖြစ်နေပါတော့သည်။ နောက်ပြီး ဒီမှာ အလုပ်တွေက net work ဆိုသည့် အသိမှတဆင့် အလုပ်ခေါ်တာတွေများသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း လျှောက်သူ အလုပ်ရဖို့ အခွင့် အရေး အလွန်နည်းသည်။ အန်တီဆွိမှာ အဲဒီဖက်မှာတော့ မာနက အလွန်ကြီးသည်။ ဘယ်သူ့ကိုတော့ဖြင့် အလုပ်ကလေး ရပါမဲ့အကြောင်း အလုပ်ရှိရင် ပြောပါဆိုတာမျိုး အောက်ကျသည်၊ နိမ့်ကျသည်ထင်ကာ မည်သူ့ကိုမျှ မပြောခဲ့ဖူးပါ။ အလုပ်ရှာနေသည်ကိုပင် မသိစေခဲ့ပါ။
အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကတော့ စိတ်ပျက်ပေမဲ့ တိုက်ဆိုင်တာလေးများရှိလျှင် ပစ်မြဲ။ လျှောက်မြဲ။
e-bay မှ on line shop...
နောက်စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုက အန်တီဆွိက လက်မှုအလုပ်လေးများ အလွန်ဝါသနာပါသည်။ အလွန်လဲ သင်လွယ် တတ်လွယ်သည် ထင်သည်။ အိမ်မှာ ယနေ့ခေတ်စားနေသည့် ခရစ်စတယ်၊ ဖန်စီ လည်ဆွဲ ပုတီးအလှလေးများ၊ လက်ကောက်ဆွဲကြိုးလေးများ စိတ်ကူးဥာဏ် ကွန့်မြူးနိူင်သမျှလုပ်ကာ အွန်လိုင်းမှာ ရောင်းရင်ကော။ အွန်လိုင်းမှာ ebay ဖြင့် business အောင်မြင်နေသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး၊ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ လက်မှုပညာလေးလဲ လုပ်ခွင့်ရမည်။ အိုးမကွာ အိမ်မကွာလဲ လုပ်နိူင်မည်။ Jewellery ရောင်းသည့် online shopping ဆိုင်လေးတွေ လိုက်ကြည့်တော့ ပြထားသည့် ပစ္စည်းတွေက ဈေးကမသေး။ ဖန်စီ ရောင်စုံလည်ဆွဲ တကုံးလျှင် လက်ရာ ကောင်းလျှင်၊ ဆိုင်နာမည်ရလာလျှင် ဒေါ်လာ ၃-၄ ဆယ် မှ ၁၀၀ အထိ ဈေးရကြသည်။ သူတို့ကတော့ နာမည်ကြီး branded ဆိုင်များတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအွန်လိုင်းဆိုင်များကို အားကျကာ စိတ်ကူးယဉ်ပြန်ပါသည်။
online Jewellery ဆိုင် အကောင်အထည် စဖော်ပြီ ...
စိတ်မြန်သော အန်တီဆွိသည် နောက်တစ်နေ့ မနက်လင်းသည်နှင့် ဂျူဂျူလေးကို ကျောင်းပို့မှ အပြန် Jewellery beads များ၊ gems များရောင်းသောဆိုင်ကို ရှာကာ ကားတစ်စီးဖြင့် ကရိယာ တန်ဆာပလာများ၊ လိုအပ်သည်များကို သွားဝယ်ပါတော့သည်။ ကိုယ်ကလဲ အစကတည်းက ၀ါသနာပါရာ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ပထမဆုံး လက်ဖြစ် ပုတီးကုံးလေးလုပ်ကြည့်ကာ ကိုယ့်ဟာကို သဘောကျနေပါသည်။ ဇွဲနဘဲ ကြီးလှသော အန်တီဆွိသည် ဤအချိန်တွင် စိတ်က ပုတီးစေ့များ၊ ပုတီးကုံးများတွင်သာ စိတ်ရောက်နေပါသည်။ ထိုနေ့က ထမင်းဟင်းများလဲ မချက်နိူင်၊ ပုတီး ၂ကုံး အပြီးသတ်လို့ မိုးချုပ်မှ ကျန်တာတွေ ဆက်လုပ်နိူင်ပါသည်။ ကိုကိုခြိမ့်မှလဲ မနိူင်၍ သည်းခံနေရပါသည်။
လာပြန်ပြီလား အင်တာဗျူး ...
နောက်နေ့ ပုတီးစေ့တွေ မလောက်၍ ဆိုင်တစ်ခေါက်သွားကာ ၀ယ်ရပြန်ပါသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ နားဆွဲလေးတွေအတွက်ပါ လိုအပ်သည်များကို ၀ယ်ရန် လိုက်ရှာနေစဉ် အိပ်ထဲမှ တယ်လီဖုန်း မြည်လာသည်။ ကိုင်လိုက်တော့ အမျိုးသမီးအငယ်လေး တစ်ယောက်အသံ၊ အင်တာဗျူးအတွက် appointment လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ့ပြောသည်က ခါတိုင်းဖုန်းခေါ်သူများလို သိပ်မမြန်ပါ။ စကားပြောရတာ အဆင်ပြေပါသည်။ သို့ပေမဲ့ ကိုယ်က ဆိုင်ထဲမှာဆိုတော့ စိတ်ကလဲ ပုတီးစေ့များထံတွင်ရောက်နေရာ သူ့နဲ့ အတိုချုံးသာ ပြောပါသည်။ မနက်ဖြန် မနက် ၁၁ နာရီ အင်တာဗျူးလာရမည်။ လိပ်စာကို email တွင် ပို့ထားသည်ဆိုသည်။ အန်တီဆွိသည် တစ်ခါတစ်ရံ နားလည်ရ အလွန်ခက်သည်။ သူသည် ဤအလုပ်ကိုလည်း ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မထားသည်ဖြစ်ရကား ခပ်ပေါ့ပေါ့ပင် သဘောထားလေသည်။ အေးဂျင့်တွေနဲ့ ဗျူးပြီးရင် ပြုတ်မှာပဲ ဆိုကာ စိတ်က လျှော့ထားသည်။
တစ်နေကုန် ပုတီးသီ ...
ကိုကိုခြိမ့်သည် အန်တီဆွိကို multitask မရဟု အမြဲစွတ်စွဲသည်။ အလုပ်တစ်ခုဆို တစ်ခုသာ စူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်တတ်သော အန်တီဆွိသည် နောက်နေ့အတွက် ချိန်းဆိုထားသော အင်တာဗျူးကို အရေးမှပင်မလုပ်။ တစ်နေကုန် ပုတီး၂ကုံးပြီးအောင် အသည်းအသန် သီနေလေသည်။ ပုတီးလေးများပြီးတော့ ညနေဖက် ဂျူဂျု့ကိုကြို၊ ညနေစာ ထမင်း၊ ဟင်းချက်ကာ ည မိုးချုပ်သွားသည်။
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှ ကမန်းကတမ်း အင်တာဗျူးခေါ်ထားသည့် email လေးကို ၀င်ဖတ်ဖို့ သတိရသည်။ ဒီတစ်ခါအင်တာဗျူးက ထူးဆန်းသည်။ ယခင်လို အေးဂျင့်ကုမဏီက ဟုတ်ဟန်မတူ၊ ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုယ်တိုင်က production လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ။ technical ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခါတည်း ဗျူးရတော့မည်ထင်သည်။
"ဟမ်မလေး..." တကယ်တမ်း မနက်ဖြန်အင်တာဗျူး ဖြေရမည်ဆိုမှ နဲနဲ ကြောက်လာသည်။ သူမေးတာတွေ မဖြေနိူင်ရင်ဒုက္ခ၊ ရှက်ဖွယ်တွေ ဖြစ်တော့မည်။ မဖြစ်သေးပါဘူး လုပ်ဖူးတာလေးတွေ နဲနဲတီးမိ ခေါက်မိ သတိရအောင်၊ အလုပ်မလုပ်ခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်ဆိုတော့ technical terms အချို့က မေ့နေတတ်ရာ လုပ်သက် ၁၀နှစ်ကျော်ဆိုပြီး ဒါလေးမှ ပြန်မပြောနိူင်လျှင် ရှက်ဖွယ်ဖြစ်မည် ဆိုကာ စာအနည်းငယ်ပြန်ဖတ်သည်။ တကယ့်မှ အနည်းငယ်။ ဖုတ်ပူမီးတိုက်နိူင်လှသည်။ နောက်တော့ personnel ဆိုင်ရာမေးခွန်းလေးတွေ၊ အင်တာဗျူးမှာ မေးနေကျ ဘာအားနည်းချက်ရှိလည်း၊ ဘာအားသာချက်ရှိလည်း အစရှိသည်တို့ ရေးထားတာလေးတွေ ပြန်ဖတ်နေသည်။
မနက်ကျ ကိုကိုခြိမ့်ကို ပြောသည်မှာ "ဆွိလေး အင်တာဗျူးတွေကို အရမ်း ပရက်ရှာ မထားချင်ဘူး။ ရရင်လဲရ၊ မရရင်လဲနေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ.။ အနည်းဆုံး အတွေ့အကြုံတော့ရတယ်ဆိုပြီးပဲ သွားတာနော်။ ဘာမှလဲ သေချာပြန်မဖတ်ထားဘူး"ဟု အိမ်ကမထွက်ခင်လေး ပြောလိုက်သေးသည်။ ပရက်ရှာတွေ လျော့လို လျော့ငြား။
(အပိုင်း (၃) ဆက်ပါမည်။)
အနောနိမတ်စ်တွေ အန်တီဆွိကို ကွန့်မန့်ပေးရင် nick name ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်က နာမည်လေးတွေ ရေးပေးပါနော် ... ဘာရယ်မဟုတ် လာအားပေးတဲ့ ပိတ်သတ်ကို နာမည်လေးတွေ မှတ်ထားချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးပါနော်။
Posted by T T Sweet at 5:41 PM
Thandar Lwin June 24, 2012 at 6:33 PM
အမဆွိ ရေ စိတ်လှူပ်ရှား စွာ နှင့် ဖတ်နေပါသည် ။ ဒီမှာ အိမ်ဝယ်မည် ဆိုတော့ အမ ဘလော့ က အိမ် ၀ယ်သည့် ပို့စ် ကို ပရင့် ထုတ်ခါ ဖတ်ရသည်။ ခုတော့ အိမ်လဲယ်ပြီးပါပြီ ။ အီးဘေး မှာ လဲဈေးရောင်းချင်သည်။
မယ့်ကိုး June 24, 2012 at 6:33 PM
Wishing u good luck, ma ma :)
Unknown June 24, 2012 at 7:37 PM
That is why u cannot post anything on your blog. I am very sorry for your hard time. At the sametime, I am glad that U chaint had the job back. I am looking forward for post no. 3. Ama. You have pure heart and helpful mind (I can notice from your blog. You always share with us knowledgeable experience.) You will success in your life. Arr loneasin pyae par say ama and U chaint (wish from bottom of my heart).
We always have problems and those problems are stepping stone for us. Don't worry ama. Now our country has changing to good fortune. We can back to our country soon.
(I understand that we could not get much income like oversea. However, we always have place to go and survive for ourselves at Burma.) You can sell the fancy jewellery at Burma as well. check at youtube DIY ama. Since you have creative mind, you can creative more after you get the idea from youtube.
Me too my company has problem and soon going to close down. But Nowadays I always thinking of going back home and stay with mom. I even think that if i cannot find the Engineering job at myanmar, I will open small restaurant or I will bake or something and sell or help my sister in home made Mango pickle business.
We are staying at oversea is just only Sturbon, Greedy and need social/modern life.
We always have place to go. That is Burma and we can survive at our country.
ဖိုးတုတ် June 24, 2012 at 8:04 PM
မဆွိရေ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ.၊ ကိုယ်က ပိုက်ဆံအရမ်းလိုနေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ရင် ရေရှည်လုပ်မဲ့ အလုပ်ကောင်းကောင်းကို အချိန်ယူပြီးရှာပါ၊ ပျင်းရင် ပို.စ်တွေရေးပေါ့၊ အစဉ်အမြဲအားပေးနေမှာပါ၊ အလုပ်အကိုင်အသစ်အဆင်ပြေပါစေ၊ ပရိုဖိုင်းအမည်ကြည့်ပြီးလူသစ်လို.ထင်ရင် ပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံကိုကြည့်ရင် မဆွိရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်ဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ်၊
AMK June 24, 2012 at 8:43 PM
ဦးခြိမ့်အလုပ် ပြန်ရသွားမှ ဘဲ ဟင်းချသွားတော့တယ် ဟုတ်တယ် တီဆွီ ခုတလော လူတွေ သိပ်လျော့နေတယ် အစိုးရအလုပ်တွေကော ပ၇ဘိတ် ကုပနီတွေကော..
JuneOne June 24, 2012 at 9:52 PM
တစ်ယောက်ထဲအလုပ်လုပ်တဲ့ မိသားစုအတွက်တော့ Risk ၇ှိတာအမှန်ပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးခြိမ့် အလုပ်ပြန်ရသွားတာပဲဝမ်းသာစရာ။ဒီမှာလဲ အိမ်မှာနေရင်းဘာလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး။ကလေးတွေကလဲငယ်သေးတော့။အမ ကအလုပ်ကံကောင်းတယ်နော်။ကံကောင်းပါစေ အမရေ။
အမရေးတာဖတ်ပြီး လိုက်တုန်လှုပ်ရ၊ ပျော်သွားလိုက်ရနဲ့ မျက်ရည်တောင် ကျမိပါတယ်။
တကယ့်ဘ၀များ ၀တ္ထုထက်ဆန်းကြယ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ
နိုင်ငံခြားမှာနေရတဲ့ဘ၀ အင်မတန်ကိုယ်ချင်းလဲစာမိ၊ ဆုမွန်ကောင်းလဲတောင်းပေးပါတယ်
အမတို့၂ယောက်နဲ့ ဂျူဂျူလေးလဲ ပျော်ပျော်ပါးပါး စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိပါစေ
ဆုမြတ်မိုး June 24, 2012 at 10:55 PM
GOOOOOOOOOOOOOOOOD LUCKKKKKKKKKKKKKKK to you ttsweet. အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေ အပိုင်းသုံးကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေပါတယ် အရင်နေ့ကတောင် ဦးခြိမ့်ကိုပြောလိုက်သေးတယ် တီဆွိကိုပိုစ့်အသစ်တင်ပါဦးလို့း)
T T Sweet June 25, 2012 at 12:57 AM
ဟုတ်တယ် ဦင်္းခြိ်မ့်ပြောတယ် ချုမြတ်ရေ။ ဒါကြောင့်တင်လိုက်တာ။ မေးနေသူတွေ များနေလို့။ ကျေးဇူးနော်။
Unknown July 6, 2012 at 10:37 PM
San San Htun July 7, 2012 at 11:06 AM
Good Luck တီဆွိ
Mary Grace July 12, 2012 at 8:01 AM